Tsiambaratelo 6 amin'ny peratra WWE sy fitaovam-piadiana tokony ho fantatrao - Wwe
Tsiambaratelo 6 amin'ny peratra WWE sy fitaovam-piadiana tokony ho fantatrao
Nanontany tena ve ianao hoe inona no vita amin'ny peratra WWE, na ahoana no ahitan'izy ireo ny fitaovam-piadiana? Raha ny ankamaroantsika dia sahirana mijery ireo mpihetsiketsika misintona hetsika mahavariana eo anelanelan'ny tady, dia mety tsy hahatratra ny antsipiriany izay miaro antsika ireo mpikomy ireo isika. Betsaka ny injeniera sy ny fitandremana miditra ao amin'ny peratra sy ny fitaovam-piadiana ho an'io tanjona io ary ireo mpankafy fikomiana rehetra any dia tena liana hahafantatra ny momba ireo lafiny rehetra ireo.
Ity ary ity misy fijerena ireo ezaka napetrak'ireo mpiasan'ny onjam-peo isan'andro sy isan'andro mba hahafahan'ny mpihetsiketsika tianao rehetra hamirapiratra eo ambanin'ny mazava tsara.
Tabilao # 1 sy fitaovam-piadiana hafa
Mora vaky ny latabatra raha apetraka eo afovoany ny hery
Ireo latabatra ao amin'ny WWE dia tsy mitovy amin'ireo latabatra ananantsika ao an-trano. WWE dia mampiasa hazo manify na plywood hanamboarana ireo latabatra ireo, mba ho mora vaky kokoa raha toa ka hery be no ampiasaina eo afovoany.
Ny vy vy eo akaikin'ny peratra dia vy tokoa. Ny lehibe iray milanja manodidina ny 250 pounds (mitovy amin'i John Cena) ary ny kely kokoa dia manodidina ny 150 pounds. Ny hazo kendo dia loaka ao anatiny ary vita amin'ny hazo manify.
Ireo fitaovam-piadiana hafa toy ny tacks, sledgehammer na fantsom-by dia tena izy, saingy ny fomba fampiasan'izy ireo no manampy amin'ny fisorohana lozam-pifamoivoizana. Ohatra, ny Triple H dia manarona ilay sledgehammer amin'ny tanany isaky ny mamely olona amin'izany izy.
Izany asa rehetra fametrahana ny peratra sy fitaovam-piadiana izany dia ataon'ny ekipa mpanao peratra, izay mendrika hajaina bebe kokoa noho izay azony ankehitriny. Saingy na eo aza izany fitandremana sy fepetra fiarovana izany dia mora tratry ny lozam-pifamoivoizana isaky ny mandeha ny orinasa mpanao tolona matihanina; araka ny efa hitantsika imbetsaka dia tsy tsara ny manandrana an'izany na any an-trano na any an-tsekoly.
# 2 Turnbuckles sy tsangantsangana
Ny paositra Ring dia manohana ny firafitry ny peratra iray manontolo
Ny tadin'ny vy izay manohana ny firafitry ny peratra dia efa voatonona tetsy aloha, ary ireo tadin'ny vy ihany no mamorona ireo andry efatra amin'ny zorony. Izahay dia miresaka momba ny vy matevina eto, ka ireo dia alaina amin'ny fotoana sasany mba tsy hiteraka ratra amin'ny Superstar.
Ny turnbuckles dia mifamatotra amin'ireo tsanganana efatra ireo amin'ny alàlan'ny visy izay mitazona ny tadin'ny peratra koa. Ireo dia ampiarahina amin'ny alàlan'ny famehezana iraisana, ary ny fihenjanana dia manampy amin'ny fihamafisana ny zava-drehetra.
Ny fonony turnbuckle (ireo misy sary famantarana) dia ampiasaina handrakofana ireo visy ireo ary ampirimina mafy izy ireo. Ka ny fikapohana azy ireo dia ho toy ny totohondry ondana.
# 3 Ny Tady
Ny tady peratra dia omena loko samihafa amin'ny alàlan'ny kasety
Ny tady dia vita amin'ny tariby manamafy. Ireo tariby ireo dia mifamatotra manodidina ny faribolana efamira amin'ny alàlan'ny fihodinana ary manana fihenjanana be dia be mba hahafahan'izy ireo manome ny vokany elastika raha ampiasaina tsara. Ny tariby manamafy dia mifono voalohany amin'ny sosona busa izay mitazona ilay tariby amin'ny alàlan'ny kasety miloko, izay manome antsika tady peratra miloko ho an'ny tranga samihafa.
Mety ho mora ny miverina amin'ny tadiny, saingy mety ho hetsika maharary ho an'ny olona tsy mahalala izay ataony.
teny mahery noho ny fitiavako anao
inona no tena itiavanao azy
Te hampidina anao mafy aho
fialamboly zavatra hatao rehefa mankaleo